कार्य कोठा, बाथरूम मा धेरै व्यावहारिक | सजाउनुहोस्
तपाईको बाथरूमको लागि ओछ्यानहरू वा niches
त्यहाँ तत्वहरू छन् जुन बाथरूममा आवश्यक हुन्छन्। नुहाउने वा नुहाउने क्रममा, उदाहरणका लागि यो सुविधाजनक हुन्छ शेल्फ जसमा विभिन्न स्वच्छता उत्पादनहरू संगठित गर्न हामी दैनिक प्रयोग गर्छौं जब हामी नुहाउँछौं वा नुहाउँछौं। यो मामला हो, किन यसलाई पूर्वचित्रण र काममा यो तत्व समावेश छैन?
एक पटक बाथरूम सुसज्जित भएपछि, एक जहिले पनि सामानहरू खोज्दछ जुन अधिक व्यावहारिक र कार्यात्मक ठाउँ प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, यी जहिले पनि हाम्रो सौन्दर्य मांगहरू पूरा गर्दैन। सामान्यतया भित्ता जस्तो समान सामग्रीले टाइल गरिएको निर्माण तखताहरूले यस समस्याको समाधान गर्दछ, तथापि तथाकथित काम को niches। हामी तपाईंलाई यसको फाइदा बताउँछौं!
तपाईले नुहाउने ठाउँमा जेल, शैम्पू र स्पन्ज आयोजना गर्न अनुमति दिने सामानहरू खोज्दै कति ठूलो क्षेत्रको बाथरूम सेक्सनमा जानुभएको छ? यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईंले यो प्रमाणित गर्नुहुनेछ कि यसको डिजाइनमा एकदम थोरै विविधता छ, जसले निर्धारण गर्दछ सामान्य बाथरूम सौंदर्यशास्त्र। त्यसैले डेकूराबाट हामी तपाईंलाई साइटमा यी आवश्यक तत्वहरू एकीकृत गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं, तिनीहरूलाई डिजाइनको हिस्सा बनाउँदै।
1 शेल्फ वा niches?
2 निर्माण niches को लाभ
3 स्थान र लेआउट
3.2 सामग्री र रंग
शेल्फ वा niches?
यदि तपाईंले यी तत्वहरूलाई साइटमा समावेश गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, पहिलो चरण हो तखता र कोठा बीच छनौट गर्नुहोस्। दुबैले तपाईंलाई स्नानमा तपाईंको स्वच्छता उत्पादनहरू राख्न अनुमति दिनेछ तर स्पष्ट व्यावहारिक र सौन्दर्य भिन्नताहरू जुन तपाईंले सायद विचार गर्नुभएन र अझै फरक पार्नुभयो।
सिल्फहरू, सामान्यतया भित्ताहरूसँग समान सामग्रीले टाइल गरिएका, सरल समाधानहरू हुन्, तर के तिनीहरू सबै भन्दा व्यावहारिक समाधान हुन्? कोठाको तुलनामा उनीहरूको एक नाका पनि छ; तिनीहरूलाई मार्ने सम्भावना। एक सानो स्नानमा तपाईं सँधै पर्खालमा ठोक्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो कपाल धोउनको लागि हात उठाउँनुहुन्छ वा नुहाउनेबाट बाहिर निस्कन। त्यहाँ किन कामको अलकत्रा हुन्छन्?
आला वा कोनाकासको यो दोष छैन। तिनीहरू सिल्फ जस्तो भित्ताबाट उत्र्दैनन्, तर यसको ठीक उल्टो हुन्छन्। Niches पर्खाल मा निर्मित छन् हामीलाई एक महान भण्डारण समाधान प्रदान। यसको आकार र डिजाइन, थप रूपमा, अनुकूलन गर्न सकिन्छ जब हाम्रो आवश्यकताहरु को लागी डिजाइन, एक कम समस्या!
मूल्य को रूप मा, यो समान हुनेछ यदि हामी एक खाली बाथरूम सामना गर्नु पर्छ। कोठा तोक्न यो सामान्यतया प्रयोग गरीन्छ, सेप्टममा खुला प्वाल र दुई पोष्टहरूका बिच प्रयोग नभएको। आज त्यहाँ स्थापना गर्न सजिलो सेट पनि छ, त्यसैले यो तपाईको घरको मूल्य बढाउने कुरा होईन।
निर्माण niches को लाभ
बाथरूमहरूमा शेलि hangingहरू झुण्ड्याउन वैकल्पिक विकल्पहरू हुन्। एक व्यावहारिक साथै सजावटी संसाधन स्नानगृह फिक्स्चरहरू संगठित गर्न जुन पूरै नुहाउने वा बाथटबको विभाजनमा सम्मिलितको लागि बाहिर खडा हुन्छ। यो निस्सन्देह यसको सबै भन्दा ठूलो फाइदा हो, यद्यपि यो एक मात्र होईन:
तिनीहरू पूर्ण रूपमा recessed छन् सेप्टममा र प्रुद्र नहुनुहोस्।
तिनीहरूले हटाउन योग्य ट्रे वा ओछ्यानमा राख्नु हुँदैन, नुहाउन वा नुहाउन उपयोगी ठाउँ प्राप्त गर्दै।
तिनीहरूले नेत्रहीन नुहाउने बनाउँछन् र बाथटब अधिक विशाल देखिन्छ।
उनीहरूले तपाईलाई आकार र र with्गका साथ सौन्दर्यतापूर्वक खेल्न अनुमति दिन्छ त्यो शैली प्राप्त गर्न तपाईं आफ्नो बाथरूमको लागि चाहानुहुन्छ। संयोजन विकल्प अनन्त छन्।
तिनीहरू सफा गर्न धेरै सजिलो छन्; तपाईं आफ्नो शौचालय छोड्न सम्मिलित गर्न सक्नुहुनेछ कि अन्य सामानहरू भन्दा धेरै सजिलो।
स्थान र लेआउट
कोठाको लागि सही स्थान छनौट बाथरूम मा कार्यक्षमता प्राप्त गर्न आवश्यक छ। नुहाउने ठाउँमा, मुख्यतया, ती प्रयोग हुन्छन् स्वच्छता उत्पादनहरू राख्न, यसैले नलको लागि पर्याप्त ठाउँ छनौट गर्नु तर आवश्यक विभाजनको साथ ताकि यसको प्रयोग व्यावहारिक हो।
यदि तपाईंसँग ठूलो नुहाउने ठाउँ छ भने, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तौलिए स्ट्याक गर्न को लागी niches जुन तपाईको अर्को बाथरूममा प्रयोग गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि, यी केसहरू नलबाट टाढा छन् र पक्कै पनि, तिनीहरूसँग पानीको सम्पर्क छैन।
यसको आकार को रूप मा, नुहाउने मा आदर्श वर्ग डिजाइन मा शर्त छ। एक, दुई, तीन र चारवटा छेदहरू जुन एक प्रकारको हाइभ बनाउँदछ यसले तपाईंको स्नानमा कार्यक्षमता र शैली थप गर्दछ। धेरै प्वालहरू हुनुको साथै, साझा बाथरूमहरूमा एक ठूलो रणनीति बन्न सक्दछ ताकि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै ठाउँ हुन्छ।
बाथटबमा, शौचालयको जस्तै ठाउँमा, तपाईं नुहाउनको अनुभवलाई अझ रमाइलो बनाउन केही मोमबत्तीहरू वा गन्ध फैलाउने चीजहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यी अवस्थाहरूमा, आयताकार कोठा सबैभन्दा व्यावहारिक समाधान हो। तिनीहरू लामो डिजाइनको साथ बाथटबमा ठिक देखिन्छन्। के तपाईं आफ्नो स्नान अधिक आरामदायी बनाउन कोनाडा मा एक नरम प्रकाश एकीकृत भने के गर्ने? तपाईं बाहिर जान चाहनुहुन्न!
सामग्री र रंग
कामको आलाहरू पर्खालमा प्रयोग गरिएको समान सामग्री प्रयोग गरी नुहाउने वा बाथटबको डिजाइनमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। यो रणनीति जहिले पनि सफल हुन्छ न्यूनतम शैली स्पेस, तर ती पनि जसमा तपाईं टाइलिंगलाई प्रमुखता दिन चाहानुहुन्छ। विशेष गरी जब यो स्ट्राइकि is हुन्छ, कुनै ध्यान नदिईएको कोठाले नेत्रहीन स्थान लाईट गर्न मद्दत गर्दछ।
तर हामी सँधै कामको केन्द्रबिन्दुमा ध्यान दिन चाहँदैनौं। र जब त्यो हुन्छ, बिभिन्न सामग्री, बनावट र / वा र withहरूसँग खेल्नुहोस् निस्सन्देह यसले तिनीहरूलाई बाहिर खडा गर्न मद्दत गर्दछ। समान प्रभाव प्राप्त गर्न अर्को सजिलो तरीका भनेको फ्रेम थप गर्नु हो। के तपाईं यस अनुच्छेदको अघि छविमा काठको फ्रेम द्वारा प्रदान गरिएको न्यानो मन पराउनुहुन्न?
के तपाइँ काम को लागी को लागी मन पर्छ? तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि, नुहाउने क्रममा उनीहरूलाई प्रयोग गर्नु बाहेक, तिनीहरू यसको बाहेक, बाथरूममा, तौलिए भण्डार गर्न, र घरको अन्य कोठाहरू जस्तै कि भान्साकोठा वा अध्ययनमा उपयोगी हुन सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » बाथरूम » तपाईको बाथरूमको लागि ओछ्यानहरू वा niches
तपाईंको घरको बगैचा वा टेरेसमा आवश्यक तत्त्वहरू